कतै ग्यास्ट्रिक देखि छाला रोग, बाथ, युरिक एसिड जस्ता रोग पालेर त बस्नु भएको छैन ? यदि छ भने यो कुण्डमा डुबुल्की मार्नुहोस रोक च्वाट्ट निको हुन्छ (भिडियोसहित) « गोर्खाली खबर डटकम
कतै ग्यास्ट्रिक देखि छाला रोग, बाथ, युरिक एसिड जस्ता रोग पालेर त बस्नु भएको छैन ? यदि छ भने यो कुण्डमा डुबुल्की मार्नुहोस रोक च्वाट्ट निको हुन्छ (भिडियोसहित)
म्याग्दी – म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ सिंगा तातोपानीमा रहेको प्राकृतिक तातोपानी कुण्डमा डुबेर उपचार गर्न पुग्नेको भीड बढेको छ ।
मानिसमा बढ्दै गएको चेतना र खुल्दै गरेका स्वास्थ्य संस्थाले, परम्परामा आधारित उपचार विधिमा विश्वास घट्दै गएको छ । तर म्याग्दीमा भने विज्ञानलाई समेत चुनौती दिदै तातोपानी कुण्डमा डुब्दा र नुहाउँदा छाला रोग, बाथ, ग्याष्ट्रिक, युरिक एसिड तथा घाउ चोटपटक लागेका बिरामी समेत निको हुने विश्वास गरिन्छ । यही विश्वासका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रबाट दैनिक सय, दुई सय जना यस्ता बिरामी तातोपानी कुण्डमा डुबुल्की मार्न पुग्छन् ।